Google teknolojii ergaa e-mail'f battalumatti deebii laatu uumuu ifa godhe - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Google teknolojii ergaa e-mail’f battalumatti deebii laatu uumuu ifa godhe
Google teknolojii ergaa e-mail’f battalumatti deebii laatu uumuu ifa godhe
Hanga ammaatti e-mail isin bira gayu hundaaf deebii laataa kan ture isinuma. Deebii kan laattan battalumatti ykn guyyoota booda ta’uun nimala. Amma garuu suni geeddaramuuf deema. Teknoljiin haarofni ‘Smart Reply’ Google uume haala kana geeddaruuf deema jedha Google.
Akka ibsa Google biraa bayetti Smart Replay email namoota biraa isin dhaqqabuuf deebii laatuudhaan akka gargaartuu ta’eeti kan tajaajilu. Teknolojiin haarofni kuni email dhaaf deebii battalumatti kan laatu qabiyyee email isin bira gayee dubbisee erga hubatee booda. Teknolojiin kuni deebii nama hundaaf ykn ergaa isin dhaqqabe maraaf deebii erga e-mail sana gitu kan laatu ta’uu isaati. Kana jechuun deebiin laatamu kan bal’inaafi gadi fageenya quubsaa qabu jechuu akka hin taane hubatamuu qaba.
Deebiin gama teknolojii Smart Reply kanaan email dhaaf laatamu hedduu xaxamaa miti: gabaabaa ta’uu bira ce’ee filannoon jirus ammatti hedduu miti. Gara boodaatti, akkuma teknolojii isa kamuu, fooyya’aa fi gabbataa deemuun isaa waan hin oolle.
Hir’inni guddaan, tarii hawaasa keenyaaf, teknolojiin kuni ammatti kan hubatuu fi deebiis kan laatu email Ingiliffaan qajeelatti barreeffame qofaaf. Ammas Googel’n hojjatame waan ta’eef namoota Gmail fayyadaman qofa tajaajila. Gara boodaatti kanniin Afaan Oromoo fi Yahoo fa’atti dhimma bayaniif tiifuun nimala. Abdiin haa jiraatu.
Smart Reply dhuma torbaan kanaatti ummata bira kan gayu ta’uu isaati Google kan labse.
Previous articlePaarlaamaan Ruwaandaa Pool Kagaameen umrii guutuuf biyyattii akka bulchu hayyame
Next articleIMF diinagdee fooyyessuuf qabxiilee Itoophiyaan irratti xiyyeeffachuu qabdi jedhu tarreesse